Weekly Promotions - Product Detail
All Items5% Discount
All Items5% Discount အသေးစိတ်
ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်အသွေးမြင့် မွေ့ရာအမျိုးမျိုး နဲ့ ပရိဘောဂများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ စိန် နဲ့ မြ မွေ့ရာပရိဘောဂဆိုင်မှာလည်း B&F Clubcard နဲ့ဆို ပရိုမိုးရှင်းရနေပါပြီတဲ့နော်…
ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ် မှုတွေကို ဖြေဖျောက်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်အနားယူခြင်းပါ…
အိပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း သက်တောင့်သက်သာ နဲ့ ဇိမ်ကျကျအိပ်စက်မှလည်း နိုးထမယ့် မနက်ဖြန်အတွက် အားအင်အပြည့်ရှိနေမှာလေ…
ရန်ကုန်မြို့မှာတော်တော်များများက တိုက်ခန်းတွေချည်းပဲဆိုတော့ ညဘက်အိပ်လို့ရှိရင် အောက်ကအအေးဒဏ်ကြောင့် ညောင်းညာကိုက်ခဲတာတွေ လေးဖက်နာ ရောဂါဝေဒနာတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ရေတိုဆိုရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပေမယ့်လည်း ရေရှည်မှာဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကျန်မာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်…
ကျန်းမာရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အခန်းမှာ စတိုင်ကျဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် မွေ့ရာ ဝယ်တဲ့ အချိန်မှာ ဒီဇိုင်းလည်းဆန်းရမယ် ၊ ဈေးနှုန်းလည်းသေသပ်လှပပြီး ခိုင်လည်းခိုင်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ စိန် နဲ့ မြ မွေ့ရာကတော့ ရွေးချယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ…
ဒါ့အပြင် B&F Clubcard နဲ့ ဝယ်ယူမယ့် Customer တစ်ဉီးချင်းတိုင်းအတွက် စိန် နဲ့ မြဆိုင်ခွဲတိုင်းမှာ ဘာပစ္စည်းပဲဝယ်ဝယ် (5) % ပရိုမိုးရှင်းရဉီးမှာတဲ့နော်…
စပရိန်မွေ့ရာလား ? ရေမြှပ်မွေ့ရာလား ? မှို့မွေ့ရာလား ? ဘာပဲလိုလို စိန် နဲ့ မြ မွေ့ရာပရိဘောဂ မှာ ပရိုမိုးရှင်းရယူရင်း စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ဝယ်ယူလိုက်တော့နော်…
စိန် နဲ့ မြ မွေ့ရာပရိဘောဂ ( ရန်ကုန် )
အမှတ် (၁၀၂)၊ ဝေဇယန္တာလမ်းမကြီး၊ ပါရမီလမ်းနှင့် သစ္စာလမ်းကြား၊တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။
ဖုန်း - 01-8566454, 01-2332018
အမှတ် B-7၊ အောင်ဆန်းကွင်းမြောက်ဘက်တန်း၊ ရန်ကုန်၊
ဖုန်း - 01-255752, 09-73244480, 09-33427177
အမှတ် F-5၊ စတုတ္ထထပ်၊ ယုဇနပလာဇာ၊ ရန်ကုန်။
ဖုန်း 01-200747, 09 453887790
B&F Clubcard အကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် 099 69910115, 099 69910128 ကိုရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…
Promotion Period - 01. Feb.2020 to 31.March.2021
B&F Clubcard - save BIG everyday
Join the B&F Club Membership today and save BIG on Travel, Accommodations, Shopping, Dining out and more. It'saunique lifestyle membership program that's all about more discounts. All in one place! B&F...
12 months - 20000 ks
10% Discount on Medical Check –Up and 5% Discount on Stress Test, Echo & CT
Are you planning to do some medical check-up?We suggest you to go to Asia Royal Hospital because it has special
10% Discount On Food Menu Total Bill
🍗ထိုင်ပဲစားစား ပါဆယ်ပဲယူယူ Western Park မှာ
20% Discount For All Menu
B&F Clubcard လေးပြပြီး 20% Discounts ရယူလိုက်ကြရအောင်
10% Discount For Buffet
Love Hot-Pot? Here we have Yangon Pot to fresh you up with 10% Discount for Buffet and A-La-Carte